५ दिनमै कोरोना जितेका बिष्णु रिमाल भन्छन्-'बेसार-अदुवापानी प्रशस्त पिएँ' - Dainik Online Dainik Online
५ दिनमै कोरोना जितेका बिष्णु रिमाल भन्छन्-‘बेसार-अदुवापानी प्रशस्त पिएँ’
प्रकाशित मिति : २३ आश्विन २०७७, शुक्रबार २ : १९
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार बिष्णु रिमालले कोरोना संक्रमणलाई हल्का रुपमा लिन नहुने टिप्पणी गरेका छन्।
रिमाल सहित प्रधानमन्त्री ओलीका ३ वटै सल्लाहकारलाई कोरोना संक्रमण देखिएको थियो।
५ दिनमै कोरोनालाई जितेका रिमालले सामाजिक सञ्जाल मार्फत कोरोना संक्रमणबारेको आफ्नो अनुभव सेयर गरेका छन्।
कोरोनालाई केही होइन भन्नु अतिरञ्जना भएको उनको टिप्पणी छ।
कोरोना संकेमणाबारेको रिमालको अनुभव यस्तो छ।
मेरो पिसिआर रिपोर्ट नेगेटिभ आयो
सहयोग, ऐक्यबद्धता र शुभेच्छाका लागि सबैमा हार्दिक आभार!
कोरोनाको अनुभव व्यक्ति-व्यक्तिमा फरक-फरक छ। कोही लक्षणसहितको संक्रमित हुनुहुन्छ। उहाँहरुको अनुभवले भन्छ- यसले पीडा दिन्छ, गाल्छ। ज्यानै गए अन्तिम अवस्थामा आफन्तहरुले मुखसमेत हेर्न पाउँदैनन्। कोही लक्षणबिनाको संक्रमित हुनुहुन्छ। हप्ता/दश दिनमा भाइरसमुक्त! उहाँहरुको अनुभवमा कोरोना त केही नै हैन रहेछ! पानी-सानी खायो-खलास्!
म पनि कोरोना संक्रमित भएँ। सतर्क रहँदारहँदै पनि कसरी संक्रमित भएँ? केवल अन्दाजै मात्र छ। लक्षणबिनाको संक्रमित-पहिलो दिन अलिअलि चिन्ता लाग्यो। आफ्नोभन्दा पनि आफ्नो परिवारका सदस्यको। संवेदनशील स्थान भएकाले आफूले काम गर्ने ठाँउको र होम आइसोलेसनमा रहेकाले छरछिमेकको!!!
मनमा आयो-अब के होला, अरुहरुले के सोचिरहेका होलान्रु कसैलाई केही भइहाले म कति दोषाी ठहरिउँला? आदि।
सिङ्गो अवधिभरि केही पनि अप्ठ्यारो महसुस नगरी मैले आइसोलेसनको अवधि आज पार गरें। दोश्रोचोटिको पिसिआर परिक्षणबाट परिणाम “नेगेटिभ” आयो। खुसी लाग्यो, म कोरोनामुक्त भएँ।
मेरो अनुभवले भन्छ-कोरोना केही होइन भन्नु अतिरञ्जना हो। र, कोरोना लागेपछि सिद्दियो भन्नु त झनै उत्तेजनापूर्ण अफवाह हो। तरीका पुर्‍याउँदा यो महामारीको असर अति न्यून हुन्छ। लापर्बाहीमा ज्यानै जान्छ।त्यसैले यस महामारीले पहिलो कुरा, अनुशासनको माग गर्छ। दोश्रो, संक्रमितको उच्च मनोबल र तेश्रो धैर्यताको माग गर्छ।
यस्तो बेलामा आउने सल्लाह-सुझावहरु पनि रंगिविरङ्गी हुन्छन्। मन आत्तिएका बेला आएजति सबै सल्लाह पालन गर्छु, भनेजति सबैथोक खान्छु भन्नेतिर लागियो भने भद्रगोलमा परिन्छ।
त्यसैले चिकित्सकीय वा अन्य कुनै पनि सल्लाह, जसमाथि बढी विश्वास छ, उसैको सुझाव फलो गर्नुहोस्। खालखालका सुझावको पछि नलाग्नुस्। मेरो विचारमा, विश्वास-अप्ठ्यारोबाट पार पाउन महत्वपूर्ण आधार हो।
मैले किर्तिपुर आयुर्वेदिक अस्पतालका डा.रामआधार यादवले सुझाउनुभएको आयुर्वेदिक औषधि प्रयोग गरें। जनस्वास्थ्य विज्ञ डा.रवीन्द्र पाण्डेले दिनुभएको सुझावलाई अपनाएँ। हामी खिसिट्युरी गर्न मज्जा मान्छौं। तर पत्याउनु हुन्छ? मैले त त्यही बेसार, कागती, गुर्जो, अदुवासहितको पानी प्रशस्त पिएँ।
राष्ट्रका अति सम्मानित व्यक्तित्वदेखि विभिन्न तह र तप्काका मलाई माया गर्नुहुने आदरणीय शुभेच्छुकहरुले ”छिट्टै निको हुन” दिनुभएको शुभकामनालाई आड भरोसाको रुपमा लिएँ। म मा अरु रोग केही थिएन। दुई चिकित्सकहरुले सुझाउनु भएको उपायले मज्जाले काम गर्‍यो।
एउटा रमाइलो गरौं? संक्रमणको दोश्रो दिन लेखकरपत्रकार विजय कुमारले फोन गरेर भन्नु भयो– बधाई ब्रदर। मैले सोधें-कुन खुशीमा? उहाँले भन्नुभयो : २/४ दिनमा तपाई ठीक हुनुहुनेछ। त्यसपछि अरु असंक्रमितहरु भ्याक्सिन खाज्दै यताउता भौंतारिने छन्। तपाई आफ्नै शरीरमा पैदाभएको ‘एण्टीबडी’को बलमा ४/६ महिना शानसँग काम गर्न पाउनु हुनेछ। अहिले आराम गर्ने, मेरो किताब- सम्बन्धहरु, पढ्ने ब्रो। मन चङ्गा भयो-कोरोना सल्केर निको भएपछि त काइदाको फाइदा पो हुने रहेछ।
लक्षण युक्त होस् या लक्षणविहीन, कोरोनामुक्त भएपछि के के नै लडाईँ जितेजस्तो अनुभूति हुँदो रहेछ। यस्तो बेलामा सतर्क हुनुपर्ने केही कुरा छन्। जस्तो कि निको हुनेले फुर्तिफार्ती गर्दै ‘मलाई त केही नै भएन, ह्या केही हुँदो रहेनछ, कोरोना न सोरोनाजस्ता हल्का टिप्पणी नगर्नुस्। केही नै नहुने त किन हुन्थ्यो र? कम्तीमा पनि अलि कमजोरी त फिल हुन्छ हुन्छ। महामारीको संक्रमणलाई सामान्यकृत गर्दा अनुशासन भत्किन्छ र त्यसले अनपेक्षित दुस्परिणाम निम्त्याउँछ भन्ने हामी कसैले पनि भुल्न हुँदैन।
आज आफू कोरोनामुक्त हुँदा देशभरका सबै सक्रिय संक्रमित दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुलाई मेरा यी अनुभव भन्न चाहन्छु । र, उहाँहरु सबैको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछु। जो जसले यसअघि नै कोरोनाबिरुद्धको लडाईं जितिसक्नु भयो, उहाँहरु सबैलाई हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छु । जसलाई पापी कोरोनाले जित्न दिएन, उहाँहरुप्रति दुःख व्यक्त गर्दै शोकाकुल परिवारजनमा गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दछु।
चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरु, अग्रभागमा रहेर जीवन जोगाउन अहोरात्र खटी रहनुभएका सम्पूर्ण महानुभावप्रति आदरसम्मान व्यक्त गर्दछु। शीघ्र स्वास्थ्यलाभको शुभेच्छासहित, परिवारका सदस्य झैं मेरो स्वास्थ्यप्रति चिन्तित हुनुहुने सबै आदरणीयहरुमा विनम्र आभार व्यक्त गर्दछु।
आग्रह गर्न चाहन्छु-सतर्क होऔं, अनुशासित बनौं।
यस्तै, प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले पनि कोरोना संक्रमणबारेको आफ्नो अनुभव बाँडेका छन्।